Kate Middleton sy Duchesse of Wessex tao Sophia dia nandamina fitsaboana lamaody tany amin'ny rindrin'ny Buckingham Palace
Ankehitriny ny Fashion Fashion dia miorina ao an-drenivohitr'i Grande-Bretagne. Amin'izany, any Londres, dia nanangona modely maro, mpanamboatra sy olona mifandray amin'ity tontolo mahafinaritra ity. Ary raha mpankafy ny fijerena lamaody ny fijerena ny sarimihetsika Burberry sy Victoria Beckham, ny sasany dia nomena voninahitra tamin'ny fanasana avy amin'i Kate Middleton sy ny Groupe Wessex mba hitsidika ny Palace Buckingham nandritra ny takariva Commonwealth Fashion Exchange.
Kate Middleton ary ny vadin'i Wessex, Sophie
Kate sy Sophie dia niresaka tamin'ireo mpanakanto sy vahiny
Tsy misy tsiambaratelo fa ny vadin'ny Printsy William Kate sy ny vadin'ny Printsy Edward Sophie dia raisina ho mianatra indrindra amin'ny tontolo lamaody ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka. Na izany aza, tsy mahagaga izany, satria efa ela ny vehivavy no nanamboatra ny sata mifehy ny "style of style". I Kate sy Sophie no nanapa-kevitra tamin'ity taona ity mba handamina ny fandraisam-pitenenana izay nasain'ireo mpamorona avy amin'ny firenena Commonwealth, ary koa ireo olona malaza hafa amin'ny tontolo lamaody. Araka ny tokony ho endrik'ilay hetsika, ny mpanjaka dia nifandray voalohany tamin'ireo vahiny tonga tao amin'ilay fandraisam-bahiny, ary taorian'izay dia nanomboka nifankahalala tamin'ny famoriam-bola ireo olona. Ny fitsaràna ny akanjo izay natolotra tamin'ny takarivan'ny Commonwealth Fashion Exchange, maro tamin'izy ireo no nifantoka tamin'ny fisehoan-javatra miavaka sy karipetra mena. Mahaliana ny mijery ny fomba niarahan'i Kate sy i Sophie, nifanila tamin'ny lafiny tsirairay, ary nodinihina tamin'ny antsipiriany.
Raha ny marina, dia nahita vahiny tsy dia liana firy ny nahita ny asa nataon'ireo mpamorona samihafa avy any amin'ny firenena 52. Anisan'izy ireo ny tonian'ny gazetiboky Amerikana Vogue, Anna Wintour, izay nanapa-kevitra ny hanatrika ny hetsika amin'ny satroka mainty sy volon'ondry miaraka amin'ny akanjo lava midi amin'ny halavany. Teo ambanin'io akanjo io, nanapa-kevitra ny hanao boot-kofehy matevina izy, mitovy loko marevaka, ary eo an-tanany dia maka loko matevina be-beige. Ankoatra ny azy teo amin'ny fandraisam-bahiny, dia hitanao ilay mpanafika lamaody Stella McCartney, izay tena sariaka amin'ny Wintour. Ny takarivan'io vehivavy io dia niseho tamin'ny satroka satroka mainty, izay toy ny akanjo ny ankizivavy tsy malaza. Tahaka an'i Anna, nampitomboin'i Stella ny sariny tamin'ny kiraro maingoka be dia be ary kofehy mitovy loko.
Kate Middleton, Stella McCartney ary Anna Wintour
Kate Middleton ary tonian'ny famoahana an'ny British Vogue Edward Enninful
Ny antsipiriany mahaliana sy ny sary momba ny fampakarambadin'ny Printsy Harry sy Megan Markle!
25 ho avy ao Grande-Bretagne
Avy amin'ny omelety ka Rapunzel: 8 amin'ireo sary mampihetsi-po indrindra an'i Rihanna amin'ny Met Gala
Kate sy Sophie dia nanao akanjo akanjo
Araka ny efa nampoizin'ity tranga ity, ny mpitsidika rehetra dia nanao akanjo fitondra amin'ny marika fanta-daza. Ny Groupe de Wessex dia naneho akanjo mafy avy amin'ny marika Burberry. Ny vokatra dia natao tamin'ny fitaovana mainty, izay, rehefa nipoitra tamin'ny hazavana, dia nariana mena. Ny akanjo dia tena tapaka tsotra: voafaritra amin'ny endrika, ny halavan'ny midi miaraka amin'ny kofehy mena eo afovoany. Raha ny momba ny Accessories, dia tsy nisy ornamenta tao Sofia. Saingy nanintona ny sain'ny maro ireo kiraro. Ny fivoriambe dia tonga tamin'ny fihaonana tamin'ireo mpanakanto anaty sambo mena mena. Tsy nianjera tao ambadiky ny solontenan'ny fianakaviana mpanjaka sy i Kate Middleton. Ny Duchesse dia naneho fomba fijery mahafinaritra, niakanjo tamin'ny akanjo marika Erdem, izay vita tamin'ny taratasy mainty sy fotsy misy sary vita amin'ny voninkazo. Ankoatr'izany dia nanao kiraro kiraro mainty tamin'ny laoniny i Kate.
Tsy nafenin'i Amber Hurd intsony ny raharaha momba ny tompony Ilon Mask, Tesla
Nahazo taratasy i Melania Trump miaraka amin'ny fangatahana hanamboarana zava-mamy vegan amin'ny sakafo amin'ny Easter Brunch
Amber Hurd sy Tasia Van Rie
Ny biography of Natalie Portman
Naomi Campbell dia nanolotra ny sariny tamin'ny sariny feno sary
I Ed Shiran dia nanomana ny hanangana trano fiangonana ao amin'ny taniny
Patrick Dempsey sy Gillian Fink dia nanapa-kevitra ny amin'ny fananganana ny zaza fahefatra!
Jennifer Garner dia hanan-janaka avy amin'ny vadin'i Ben Affleck!
Famongorana ny tulips hatramin'ny 8 Martsa
Fantatry ny Facebook ny zava-drehetra momba ny fifankatiavanao taloha sy ny fitiavanao, ary mampatahotra izany!
Marika mba hahazoana vola
Joy Corrigan dia naneho endrika tsara tarehy tao amin'ny sary tsy misy sary
Ravioli miaraka amin'ny akoho
Ahoana no fomba ampianarany ankizy iray hihinanana sotro iray manokana - toro-hevitra tsara indrindra ho an'ny ray aman-dreny tanora
Anarana fihomehezana ho an'ny sakain'ireo tovovavy
Ahoana no hamoy 10 kg isan-kerinandro?
Fanorenana fanala - spring 2016
Inona no nofinofin'ny voay?
Carpaccio amin'ny akoho
Vorona ao amin'ny efitrano misy balkon
Rahoviana no miseho eo amin'ny kibon-dreny ny tady?
Roll Rolls miaraka amin'ny ranomanitra